१२० दिन लामो लकडाउन हट्यो, के केमा प्रतिबन्ध कायमै छ? - Nepal Readers
१२० दिन लामो लकडाउन हट्यो, के केमा प्रतिबन्ध कायमै छ?
के के मा प्रतिबन्ध कायमै छ?
तर सरकारले होटल तथा रेष्टुरेन्टहरु साउन १५ बाट खुला गर्न अनुमति दिएको छ । भदौ १ गतेबाट विद्यार्थी भर्ना र परीक्षा लगायतका गतिविधि गर्न छुट दिएको छ ।यस्तै यस्तै आन्तरिक तथा अन्तराष्ट्रिय हवाई उडान तथा मध्यम र लामो दुरीका अन्तरजिल्ला का यातायात भदौ १ गतेबाट खुला हुनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय खेलका प्रशिक्षण र प्रारम्भिक खेलहरु पनि भदौ १ गतेबाट गर्न सकिने भएको छ ।
२०७७ साल साउन ५ गतेसोमबार बसेको मन्त्रिपररषद् बैठकका निर्णयहरू